MultiBillionaires kewara Chukwu Chukwu maka Kimroy Bailey - Kimroy Bailey Group
Otu Kimroy Bailey na-agbagha ọtụtụ usoro azụmaahịa na echiche banyere azụmahịa na narị afọ nke 21. Nke mbu, ụlọ ọrụ ahụ ji nkwuwa okwu na-ekwupụta na weebụsaịtị ya na ọ bụ ụlọ ọrụ na-ejide onwe ya nke Jizọs Kraịst na alaeze nke eluigwe na-eduzi ya. Ndị otu nke ụlọ ọrụ nke gụnyere Kimroy Bailey Renewables LLC, Kimroy Bailey Robotics Ltd, Na Kimroy Bailey Foundation niile jisiri ike n'okpuru nche anwụ nke Kimroy Bailey Group INC.
Otutu ndi nwere ijeri na ijeri, di na nwunye, Kimroy Bailey na Sherika Trott-Bailey enweghị ihe ngosi gbasara eziokwu ahụ bụ na ha bụ ndị na-eso ụzọ Jizọs Kraịst, onye ebum n'uche ya bụ igosipụta Kraịst na ụwa azụmahịa.
Di na nwunye ji okwu nke aka ha kwuo nke a "wma ndị mmadụ chee echiche banyere Chineke, karịchaa Ndị Kraịst, ha anaghị eche banyere ya na azụmahịa. Ndị mmadụ na-ahọrọ idebe Chineke na obere igbe okpukpe. Agbanyeghị na Chineke bụ nwoke azụmaahịa kachasị - ọ bụghị dịka usoro ụwa a si dị ma ọ bụ ọbụna ụfọdụ ndị yiri ka o ziri ezi na ụkpụrụ okpukpe ụka na-agbaso. Nihi na uzọ Ya di anya karie ka anyi me kwa ihe nke uwa"
Kimroy Bailey Group bụ kuki dị iche na ụwa azụmaahịa ebe ọchịchị ikeketeorie na-achị, mana kpachara anya, nke a abụghị ụlọ ọrụ na-adịghị mma. Nnukwu otu ijeri dola iri abụọ na ụma zoro ezo wee mee ka ihe nkiri ahụ dị na Kimroy Bailey Robotics site na ịre usoro nkuzi nke anwụ na ntanetị. Afọ abụọ ka e mesịrị ha Nzọụkwụ Soro Solar Solar bụ ọnụ ọgụgụ otu na-ere ịntanetị na ịntanetị! Onwebiga ókè n’arụrịrị usoro agụmakwụkwọ na-esite n’aka ụlọ ọrụ nwere ikikere dịka Harvard na MIT
Plansfọdụ atụmatụ Chukwu maka Kimroy Bailey Group
Otu Kimroy Bailey bu nnukwu ndi puru iche na ulo oru Renewable Energy na Robotics. Otu a jisiri ike rụpụta ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ruru ijeri dollar dollar nke ha na-akpọ roboti mmebi. Ego azụmahịa nke otu a sitere na e-commerce maka Solar Online Training Courses, Solar & Wind Installation nwụnye, Solar Gaming & Mmụta Ngwa.
Ndi otu a n’enye ndi ahia aka dika ndi oru ha na ndi ozo dika ulo oru ha ma obu ndi n’enye ha otutu ndi ozo tinyere ha enweghi ike: Renewable Energy (Solar & Wind), Robotics & Artificial Intelligence, Education, Automation Home, Hotel, Media, Movie, Ejiji na Ntụrụndụ.
Otu Kimroy Bailey Group na-ejikwa niche na-arụpụta ngwa ahịa ọhụrụ na ngwa mmepe mmepe yana ngwa ahịa na ngwa ọdịnala nrụpụta ọhụrụ, Mmemme Mmeghari ohuru na mmemme Robot & Ihe Ntụrụndụ.
Igwe ihe nlere nke Bailey's-Renewable Robotics
Chineke bụ nkwuputa e gosipụtara n’ihu ọha n'azụ ụlọ ọrụ Kimroy Bailey na echiche niile na ngwaahịa ndị si na ụlọ ọrụ a na-eto ngwa ngwa. Sherika na Kimroy Bailey kọwara mmekọrịta nke ha na Chineke.
“Hm nwere ike ikwu ya- Popsie (aha Chineke) ọ bụ ya nnukwu! Ọ bụ onye ngosi ihe nkiri na atụmatụ ya maka mmadụ ọ bụla nọ n ’ụwa gazillion 100,000,000 ga-adị mma karịa nke ha nwere maka onwe ha. Ma onye obula aghagh inwe nmekorita nke ha na ya na Chineke ma kwere na onwe ha. Chineke anaghị amanye onwe ya imegide ndị mmadụ.
Sherika gara n'ihu ikwu,
"Mụ na Kimroy kwenyere na Chineke maka ihe ndị pụrụ iche, yabụ anyị na-enweta ihe na-enweghị atụ. Ka osi dị, onye ọzọ nwere ike chọọ naanị ihe dị mfe, yabụ na ọ bụ ihe ha na-enweta n’aka Chineke-ihe dị nfe. Onweghị ihe dị njọ na ihe dị nfe kama ihe ị chọrọ ka ị nweta ”
Mụ na di m hụrụ n’anya ikwe ka Chineke na-agbanwe akwara ya na ndụ anyị. Obu na Chineke adigh enweta ndi kwere ekwe nelu uwa nke g’eji okwu nke ya we kwere na ya megide ihe nile. na-ekwupụta Sherika Trott-Bailey.
Di na nwunye nke nwere otutu ijeri ijeri wee puta na robot puru iche n’ebe omumu ihe ha di. Igwe okwu nnabata a nke na-akuziri ndị mbido mmalite nke robot bụ nwa nke ụbụrụ nwatakịrị nwoke na nwanyị ọhụrụ Kimroy na Sherika Trott-Bailey. Rasta Robot na-agafe niche ha Robotics Renewable Robotics site na inye ndụmọdụ na ezigbo oge ndụmọdụ maka ndị na-eme ka usoro mgbake a ga-eme mmeghari ohuru.
Otu ngwaahịa sitere na Kimroy Bailey Group, Rasta Robot nke na-akuzi isi mmalite nke robot
Mana Gini mere Rasta Robot?
Kimroy & Sherika jikọrọ aka na-ekwupụta na "Dị ka ọtụtụ ngwaahịa anyị, mmụọ nsọ na-eme ka echiche anyị. Chukwu nwere ịhụnanya na ọhụụ zuru ụwa ọnụ maka obodo agwaetiti anyị nke Jamaica na ụwa. Maka Jamaica, o choro ka ndi obodo anyi mara obodo ha n’uwa ozo. Anyị bụ arịa dị njikere ịrụ ọrụ. A na-egosikarị ụdị ọdịnala a ma ama bụ "Rasta" na Mgbasa Ozi dịka mmadụ n'otu ebe ebe anwụrụ ọkụ na-ese wii wii, n'ụsọ osimiri, n'okpuru osisi akụ. Anyị chọrọ ịtụgharị edemede ahụ. Ugbu a, mgbe ndị mmadụ na-eche maka Rasta anyị chọrọ ka ha chee -''Eh Yeah Jamaican technology, nke kacha dị nkọ, nke nwere ọgụgụ isi na nke savvy 'n'ihi na ọ bụ anyị bụ."
Robotic Wind Turbine
Ihe ozo ndi ozo sitere na Kimroy Bailey Group bu Intanet nke ọgụgụ isi Robotic Wind Turbine. Egwuregwu a na - agbanwe teknụzụ dị njikere ịgbanwe teknụzụ ikuku a na - agbanwe agbanwe na ahịa ugbu a.
Kedu nsogbu bụ nsogbu ikuku ikuku Robotic?
Teknụzụ ikuku ikuku nke dị ugbu a na-enwe ike igbanye ike na mpaghara naanị oke ikuku. Ọ bụ ya mere ojiji ha pere mpe naanị na mpaghara ole na ole n’ime mba ole na ole. Mpaghara ikuku dị elu kwesịrị ekwesị ga-enweta ọbụna obere oge mgbe ị na-emeso ụgbọ elu ikuku nwere oke ikuku nwere ike ị nweta ike dị ukwuu.
Ma chee n’echiche na enwere usoro na usoro akpọrọ maka eriri ọgịga ikuku nke ga - enye ohere maka ị nweta ọkụ eletrik ọbụladị n'ọnọdụ ikuku dị ala. Kedu ihe nke ahụ ga-apụtara maka ụwa ndị ọzọ nwere ntakịrị ikuku na oke olu ha?
Mmechi maka umu Chineke
Nọrọ na-elele ka ihe dị egwu na ihe na-agbanwe agbanwe ụwa na-esite na ezinaụlọ a na ọtụtụ usoro nke ngwaahịa na ọrụ ya. Ndị otu a ụlọ ọrụ Kimroy Bailey ga-ejikwa ọnụ a kpuchiri ụwa na mkpịsị aka ya ka ọ na-agbasa ma na-achịkwa mbara ala na azụmaahịa. Ọ bụ obere oge tupu ijeri dollar, karịrị akụnụba nke ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ Otu ụlọ ọrụ dị ugbu a - name kpọrọ ha Walmart, State Grid Corporation of China, Sinopec otu, Toyota Motor, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Apple Inc , Facebook LLC, Amazon, Google bidoro isonye na Kimroy Bailey Group. Ka anyị kpọọ ya ọnụọgụ dollar-iri ọhụrụ.
13 Eserese: KB nke 2013 kachasị mma!
Kimroy Bailey afọ 2013 na ntụle, n'okpuru bụ ndepụta nke ihe ndị ọ rụzuru, echeghị ya n'usoro dị mkpa na… GỤKWUO
Afọ 2014 bụ nnukwu afọ! Oge efe efe. Afọ ahụ Kimroy Bailey Foundation etinyere ikuku ọrụ ya nke mbụ… GỤKWUO
Mụ akwụkwọ sitere na Ardenne High na KB Robotics Booth Kimroy Bailey Robotics doziri nnukwu ihe nkiri nke mbepụ Jamaican… GỤKWUO
Kacha mma nke 2012: Peeji nke ise nke afọ
Na Jenụwarị 26, 2012, edepụtara m Blog Post mbụ m; Ekpebiri m kemgbe, na m ga-etinye ihe a ... GỤKWUO
Ngwa ahịa nke Yam mepụtara
The Kimroy Bailey Foundation na-eme nchọpụta site na ngwaahịa-: mkpụrụ achicha, ice cream & iko achicha na-eji akwa ja ... GỤKWUO